भागरथी हत्या प्रकरण: परिचितबाटै हत्याको आशंका - GalaxyPati
दूधमा मह हालेर पिउनुमा फाइदै फाइदा !
दम्पतीबीचको उमेर कति वर्षले अन्तर हुनुपर्छ ? जान्नुहोस्
भारतबाट थप १० लाख डोज कोरोनाको खोप आज नेपाल ल्याइँदै
१७ औँ दिनपछि भागरथीको राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर अन्त्येष्टि
आज प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदै
आज वसन्त पञ्चमी: विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइदै
रअ प्रमुखको भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीलाई रवीन्द्र मिश्रका ८ प्रश्न
न कुनै फिल्म, न शो, न कुनै विज्ञापन, तैपनि राखी १५ करोडकी मालिक !
२०५९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या १ लाख नाघ्यो
भक्तपुरमा बुटवलका कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु
टीकापुरका महिलाको आम्दानीको स्रोत बन्दै भैँसीपालन
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो- आइसोलेसनमा नबस्ने संक्रमितलाई ६ महिनासम्म कैद हुनसक्छ
नेकपाकाे केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित
धरानमा प्लाज्मा थेरापी गरिएका एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु
भागरथी हत्या प्रकरण: परिचितबाटै हत्याको आशंका
२०७७ माघ २५, आईतवार १०:२६
भागरथी भट्टको हत्या परिचित व्यक्तिबाटै भएको आशंका अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले गरेका छन् । घटनास्थलबाट मोबाइलसहित अनुसन्धानका थुप्रै ‘क्लु’ फेला परेकाले अपराधीको नजिक पुगिसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
घटना बुधबार अपराह्न ३ बजेतिर भएको प्रहरीको अनुमान छ । घटना अनुसन्धान गर्न एसएसपी जनक पाण्डेको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडी र इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनको टोलीलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरिएको छ । सीआईबीबाट निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका लागि कञ्चनपुरमा रहेका डीएसपी पञ्चकुमार बाखुको टोलीलाई नै भागरथीको मृत्युको छानबिनमा पनि खटाइएको छ।
भागरथीको शवसँगै भेटिएको मोबाइल र त्यसको कल डिटेलबारे अनुसन्धान गर्न विशेष टोली खटिएको छ । प्रहरीले केही युवामाथि शंका गरेको छ । भागरथी अध्ययनरत विद्यालयका शिक्षक, नजिकका साथी, गाउँका मानिससँग उनको आनीबानीबारे सोधपुछ गरिरहेको छ । सोधपुछको दायरामा नआएका तर शंकामा परेकामाथि सूक्ष्म निगरानी गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार बुधबार भागरथीलाई मोबाइलमा केही कल आएको थियो तर उनले रिसिभ/कलब्याक गरेकी थिइनन् । विद्यालयबाट निस्कँदा चार जना सँगै थिए तर घरमा आमा एक्लै रहेको भन्दै भागरथी छिट्टै घर पुग्ने गरी साथीहरूबाट छुटेर हिँडेकी थिइन् ।
घटनास्थलबाट मोबाइलसहित अनुसन्धानका थुप्रै ‘क्लु’ फेला परे पनि प्रहरीले यसबारे केही खोलेको छैन । ‘अपराध गर्ने व्यक्तिको नजिक पुगिसकेका छौं । पोस्टमार्टम रिपोर्ट, भजाइनल स्वाब र शरीरका नीलडामको प्रमाणबाट शंका गरिएका मानिससँग भिडाउन बाँकी छ,’अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीले भने । धनगढीबाट ल्याइएको कुकुरले पानी परेकाले सामान्य अवस्था जस्तो विस्तृतमा संकेत नदिए पनि अपराधको ‘लोकेसन’ पहिल्याएको अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतले जनाएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले समाचार लेखेका छन् ।
आज सार्वजनिक बिदा तामाङ समुदायले सोनाम ल्होसार मनाउँदै
रेशमलाल चौधरीलाई निर्दोष भएको दाबी गरेका छन्। मन्त्री लेखराज भट्टले
सम्पादक: नीरज पिठाकाेटे मगर
बिशेष संवाददाता: आनन्द कुमार पटेल
सलाहाकार: बलदेव भट्ट
प्रकाशक : सनी कपूर महतो
ग्यालेक्सी तराई मिडिया प्रा.ली. बिरगज ११ पर्सा
दर्ता न. १७९५८४/०७४/०७५
सम्पर्क न: ९८४५०३२८२९ , ९८०४२७४७०८
शाखा कार्यालय (मैतिदेवी काठमाडौं)
© 2074-2077, All right reserved to GalaxyPati